Ejiji mara mma na akwa - ụdị na ụdị nke ibe: mbughari, nguzo, eriri, olu akwa, turndown, ụgbọ mmiri, Bekee
Uwe na olu akwa - 44 foto nke mara mma ejiji na a olu akwa n'oge niile
Mara mma, ihe siri ike, akwa akwa - ikpu agha ebighi ebi nke mmekọahụ. Ụdị uwe a mara mma na-etinye mgbanwe ndị ejiji na-emetụta. Uwe na ngwugwu bụ mgbanwe dị iche iche nke ejiji maka ndụ kwa ụbọchị na ememe.
Ụdị ụdị nke ejiji
Ọ dị ịtụnanya na obere nko dị ka olu akwa, nwere ike ịgbanwe uwe dị mfe, nke a na-ahụkarị. Ejiji na iri afọ ndị gara aga, ejiji na ngwongwo jiri mmeri laghachi azụ, na-emeri obi nke ịchọ mma na ntụgharị na nkwonkwo mara mma. O siri ike ịghara ịkọwa na nhọrọ kachasị ewu ewu bụ ihe dịka akwụkwọ, ma uwe ejiji na-adịkarị mma.
Ọ bụ ezie na ọ dị mma iburu n'obi na mgbanwe ndị dị na agba arụmọrụ emewokwa ka uwe ụmụ nwanyị na-ejiji ejiji. A na-eji ákwà dịgasị iche iche (owu, knitwear, silk, satin), ejiji eji mma mara mma, mee ka onyinyo ahụ bụrụ ihe na-ese onyinyo, zoro ezo n'ime ihe dị mma. A na-ewere ya dị ka nuance n'ezie, mgbe akwa ákwà akwa dị iche na agba nke olu. Ihe kachasị ịtụnanya bụ na nju ya nwere ọdịiche dịgasị iche na ọ dịghị mkpa ikwu okwu gbasara mpempe:
yoke / ugbo / swing / ụgbọ mmiri;
turndown / Bekee;
Ejiji mara mma na akwa
Uwe na yoke yoke
Uwe na ụdị olu a na-adị mgbe niile na uwe ejiji nke ụmụ agbọghọ na-ele ihe ejiji. Ụdị mbụ nke akpa ahụ dị mma nke ukwuu dị ka ọdịdị dị mma na n'otu oge nwanyị. Ihe nkedo bụ nkwekọ nke n'olu dị ka ụdị nke ọ bụla dị na mpempe akwụkwọ. Ụdị ihe eji eme ka uwe dịka yok nwere ike ịdị iche na nha.
Enwere nsụgharị na-ejide onwe ya na obere ihe a na-ahụ anya. N'ọnọdụ ụfọdụ, yok nwere ọdịdị dị oke mma, ọ bụ isi ihe oyiyi ahụ. A na-ejikarị otu ákwà ahụ na yok na otu agba dị ka ihe niile, ọ bụ ezie na e nwere ụdị nke nkiri ahụ na-egosi. Ọ bụrụ na enwere ọchịchọ ichota onyinyo ahụ ntakịrị, a na-agbakwunye ụyọkọ ahụ na brooch ma ọ bụ ogologo ogologo ya na akwa.
Onu ogugu a na-acho azu n'elu uwe
Ngwurugwu kachasị mma maka ndị na-eji oge ha egwu ma na-ahọrọ uwe akwa polyvariant. Ihe nlereanya nke a na-ewepụ ọrịa strok a na-emepụta ejiji bụ "gbanwee ghọọ akwa ejiji na-eji aka dị mfe nke aka." Nke a dị mfe ịgbanwe, dochie akwa ụdọ na-eji ngwa nri ma ọ bụ bọọlụ chọọ ya mma, na voila: ụda olu nke dị nro na-anọchi anya ihe mara mma. N'oge oyi, a na-eji uwe na - eme ka ejiji dị mma - mkpu aji - olu. Na mgbakwunye na mfe replaceability, ihe mkpuchi n'elu na akwa dị mma n'ihi na ha nwere ike iji dị ka ngwa na uwe elu ma ọ bụ uwe elu.
Akara akwa - ekele site n'oge dị anya gara aga. Site n'oge ruo n'oge, nwanyi choro icho uwe ha na ejiji di mfe, na-eme ka ha na-agbakwunye ya ma obu na-emechi ya. Ihe ndị dị taa na-amasịkwa ọzọ site na mkpakọrịta a. Mkpụrụ obi dị nro nwere ike ịme ume na - enwere obi ụtọ - oge a ka ha nwere mmasị na emem:
Onye ndu bụ ihe dị iche iche - uwe ejiji na ejiji ọcha. Ngwa beige na nwa dandy dị obere.
Na ihe nlereanya na-enweghị aka uwe, a pụrụ ịmepụta akwa ákwà a nke ọma site na ọmarịcha nku "nku".
Okwesiri na ọnọdụ ọ bụla, uwe ejiji na akwa na-acha ọcha na eriri akpụkpọ ụkwụ.
A naghị eji ejiji na-eyi uwe mara mma, nke ụkpụrụ ahụ na-aga n'ihu n'igbe.
Uwe na ngwugwu nguzo
Enweghị ike ịdị ọcha na njide ejiri mara mma nwere uwe na ngwugwu. Ụdị ụdị a, nke ghọrọ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ iwu na uwe ndị inyom ndị a, enweghị mmasị n'ihi ọdịdị dị nnọọ mfe. Ma ndị na-emepụta oge a gara n'ihu, na-ejikọta eriri ahụ na ihe ndị dị ụtọ - coquette, skirts, strap with buttons, guipure, paillettes. Uwe a mechiri emechi na ngwongwo-aka na akwa aka nwere ike ịbịaru ma ọ bụrụ na mpaghara decollete dị oghe. A na-enye ụmụ nwanyị ụdị nke a na-eji akwa lace.
Uwe na akwa akwa
Ònye ga-eche na ndị dị mma na ndị dị otú ahụ "dị mma," dị ka ụmụ akwụkwọ ụlọ akwụkwọ Soviet, ga-aghọ ihe dị mkpa na - achịkwa n'egwuregwu Olympus n'afọ ndị gara aga. Ụdị dị iche dị iche na njedebe ya na-abaghị uru na ákwà. Uwe a na-eji akwa akwa akwa mgbe niile na-ahụ ebe ọ na-eji ejiji uwe ụmụ nwanyị, ma n'oge na-adịbeghị anya, ọ nọ na elu ya.
Otu n'ime ihe ndị metụrụ ụda olu ahụ, ọ bara uru ịkọwa ihe ndị a:
Dị ka anyị kwugoro n'elu, ihe a na-eme ka ọ bụrụ nke etiti ma ọ bụrụ na ọ dị oke iche, ọdịiche dị iche maka ụcha nke uwe.
Ụdị olu ahụ nwere ike ịbụ ọ bụghị naanị oval, kamakwa ọ bụ akụkụ anọ, akụkụ anọ.
Eziokwu ọzọ dị na ya bụ ọmarịcha ihe ndozi, bụ nke ọ na-adịghị mkpa maka necklaces ma ọ bụ beads kpamkpam. A na-eji ọla kọpa, akpa, ngwa ngwa ígwè, paillettes, ịcha mma nke eriri ma ọ bụ ribbons, rhinestones.
Ọ na-abụkarị ejiji na ngwongwo na kpara na ụdị yiri ma ọ bụ agba.
Emechi machibidoro ime ihe mgbe ụfọdụ na-agbatị ogologo uwe ahụ.
Ụgbọ mmiri na akwa
Ihe ole na ole na-adaghị adaba, ma nke a na-agbanye n'ọdụ ụgbọ mmiri mara mma nke dị n'elu uwe ahụ, na-ekwusi ike na odidi nke eriri ahụ na olu dị mkpa. Ihe nlereanya nke ejiji dị mma maka ụmụ agbọghọ nke ụdị ube, bụ ndị kwesiri idozi ọkpụkpụ dị nkè na mmekorita ahụ:
Ngwurugwu nke ụgbọ mmiri ahụ na-eji ejiji bụ ihe dị mma, na-emesi akụkụ ahụ ike nke ahụ ike.
Ihe odide ndị dị n'ime afọ na-eme ka ọdịiche dị n'etiti ubu na ukwu.
Ụgbọ mmiri ahụ na-emesi ịdị mma nke akwa uwe mgbede na ụdị ejiji na-agbanye ala.
Enwere ike ịmepụta ihe na-egbuke egbuke site na mpempe akwụkwọ, na-emepụta ngwugwu na elongated version.
Ụgbọ mmiri ahụ dị mma nke jikọrọ ya na ogologo aka ma ọ bụ ọkụ ọkụ.
A na-eji okpukpu dị iche iche na-agbanye olu n'olu mgbe ụfọdụ: ọ dị mma na ejiji na-acha anụnụ anụnụ ma ọ bụ na-acha anụnụ anụnụ na ejiji ọcha.
Akara ejiji maka uwe
Weta na ihe ngosi nke nrọ na romance ga - enyere aka nkwekorita na uwe. N'oge na-adịbeghị anya, uwe ndị a kpara akpa na-ebipụta akụkọ nke ewu ewu, nke a na-ezutekwa n'ụzọ zuru ezu na nke a. Ọzọkwa, nkà nke ijikọta nwere ngwá agha bara ọgaranya:
Klaasị nwere ike ịchọta nke ọma n'enweghị ihe mgbochi, ihe kacha mma maka ejiji na ụdị azụmahịa.
Ejiri ntutu, ichikota okooko osisi, akwukwo, usoro ihe ojoo, nchikota uzo na ihe di iche iche bu ihe ndi ozo na-emeputa.
N'ihi na ụda azụ na-agbanyeghị ụdị nke Jane Eyre dị mma.
Ebumnobi ndị ọzọ na-adọrọ adọrọ ga-ebubata n'ilekọta nke ndị niile ejiji, yi uwe na-emeghe na eriri.
Ụdị nke mbụ ahụ dị mfe, nke a na-eji ejiji na-ejikọta ya na bọtịnụ.
Uwe na akwa olu
Ihe dị mkpa nke uwe kachasị dị mfe ga-abụ ịkụ mmiri, ma ọ bụ mmiri mmiri. Mmasị na-adọrọ mmasị n'olu olu na-eme ka mmiri iyi mara mma nke yiri iyi iyi mmiri ma ọ bụ ihe nkedo. Ka draperies ọ bụla na-eme ka olu ahụ dị elu, uwe na akwa na ụdị a ga-abụ ụmụ nwanyị na-ejide obere obere na-achọ ka ha lee anya.
Uwe a na olu nke ụdị a jupụtara na nhazighachi, dịka olu nke a na-esi na ya na amara nke Greek togas. Maka ndụ kwa ụbọchị, ọ bara uru ịhọrọ ihe nlereanya na necklow. Ụbọchị ndị pụrụ iche na-enye nnwere onwe dị ukwuu karị, n'ihi ya, ịdị omimi nke mkpirisi ahụ nwere ike ịka njọ. A na-ejikarị ákwà dị iche iche na-emepụta ihe dị iche iche, a na-enwe ụdị ebe a na-ekenye collar na ụda dị iche.
Uwe eji olu Bekee
Eji mara Bekee maka ịma mma na njide. Ihe olu Bekee na- egosi nke a: otu apị ụkwụ, nke nwere akụkụ abụọ - olu ahụ site na n'elu na akwa ukwu n'okpuru, ọ dị mma ma dị ùgwù. Azu nke uwe nwoke a bu ndi na-emeputa ya ma jiri aka ya mee ka o doo ya anya. N'ụbọchị anyị, ụdị uwe a bụ uwe ndị agadi. Ekwenyere na ụdị ụdị a ga-eche ihu naanị ụmụ nwanyị Balzac. Ma ọdịdị nke oge a na-enyekwa ụmụ agbọghọ mara mma nke nwere nlezianya ịke a mara mma obi na mkpanaka nke ọnụ ọgụgụ:
Maka ụlọ ọrụ ahụ, uwe ejiji ejiji abụọ na-edozi nke ọma nke nwere olu Bekee nke ụda mmeri.
Ike dị elu nke ala na-ebelata ogo nke njigide.
N'ịtụle ụdị ihe dị iche iche nke ejiji ụmụ nwanyị, ị gaghị enwe ike ịchọta ihe dị mma na-adọrọ mmasị na ụdị uwe.
Ejiji ejiji na akwa
Oge nke oge a bara ọgaranya n'ụdị dị iche iche nke ejiji. Ma ezigbo ihe mkpuchi na uwe - ụdị ngwa. Iji bụrụ ihe ejiji, naanị ị ga - ahọrọ nhọrọ nke ga - adịrị gị mma:
Ihe ndekọ niile nke mkpa dị ka ihe gbasara akpa na ngwugwu ma ọ bụ gbadaa.
Uwe ejiji gị nwere ike imeju uwe-trapezoid , nke a na-eji akwa akwa ma ọ bụ àgwà akara.
Maka ọdịdị ọdịdị ịhụnanya, ụdị nke nwere uwe mwụda anyanwụ nwere ntụgharị ihu ma ọ bụ okwu Bekee kwekọrọ.
Uwe ogologo ya na akwa nkpa mma dị mma n'ụdị ọ bụla.
Ịdị umeala n'obi nke eji emechi emechi na-eme ka ndị niile na-ahụ anya ghara ilebara nwunye nwanyị ahụ na-alụ ọhụrụ anya, kama ọ bụ n'ebube na icheiche nke oge ahụ. N'afọ ole na ole gara aga, ejiji abụghị ejiji ejiji, kama uwe agbamakwụkwọ na ngwugwu. Ọ dị mma ma ọ bụrụ na ihe ahụ mere n'oge oyi. Ọ bụrụ na a na-eji agbaji mee elu, mgbe ahụ, njirimara "emechi" bụ naanị ọnụ. Ezigbo ihe nlereanya na ụgbọ mmiri na-agbawapụ.
Uggs na rhinestones
Ejiri akwa uwe
Ụmụ nwanyị na elongated oyi elongated Jaketị
Uwe ejiji - ejiji eji eme ihe maka ndi kachasaputa
Sneakers Reebok mfe
White denim uwe mwụda
Kedu ka esi esi kpochaa akwụkwọ ahụaja vinyl dị mma?
A na-esi ísì ụtọ maka ụmụ nwanyị Bruno Banani
Isiokwu dị n'ime ụlọ ahụ
Moccasins akpụkpọ anụ
Nwaanyị Libra - gini bu?
Kedu ihe dị iche n'etiti ịhụnanya na ịhụnanya?
Ncha maka akwarium
Ugwu elu na ụlọ elu
Mint maka ihu
Nri site na ọbara - nkọwa zuru ezu
Onyinye maka ụmụ agbọghọ maka Afọ Ọhụrụ
Linoleum n'okpuru paquet
Nri abalị maka ọnwụ
Kedu ka esi jupụta okwu gị site n'okwu ọnụ?
Candles Nystatin na afọ ime
Kedu ka foto ahụ dị na ya si maa mma?
Kedu nke ígwè dị mma?